Ny fitsipika fototra ny masonry hiatrika biriky | karbaona mainty N-550 | Lavenona hanorina | Hivarotra lavenona Kremenchug
Izany no nanolorana azy ho mampiasa ny grout (simenitra PC 400-500) tsy additives. Dia aleo ampiharina ny simenitra atao ao amin'ny vanin-taona mafana. Mampiasa fasika sy ny rano misy tsy misy rano-izay mety levona sira. Ampiharo "mafy" solution, ary mitandrina be loatra dilution amin'ny rano (ny fivezivezena vahaolana tsy tokony ho mihoatra ny 7 mm). Tsy mba hanampy ny vahaolana ny amin'ny additives. Mampiasa ny masonry vao avy nanomana vahaolana. Mba hisorohana ny fampiasana ny recessed seams. Ny ambony indrindra ny halalin'ny ny seam — ny halalin'ny chamfer (tsy mihoatra ny 3 mm lalina any amin'ny masonry), jereo ny Kisary. No. 1. Toy izany seams fahazoan-dalana manao manokana rassevat (jereo ny Kisary.2). Ao ny fananganana masonry tsy mamela ny ingress ny rihitra. Amin'ny fifandraisana amin'ny vahaolana eo stacked masonry — hanala azy amin'ny maina borosy na ny andro manaraka, hamafa ny borosy amin'ny rano. Tsy hamafa ny rindrina anoloana amin'ny burlap-kitapo. Isan'andro, rehefa avy ampiasaina, rakotra rindrina amin'ny tantera-drano ara-nofo (tafo nahatsapa, sarimihetsika, sns.). Tsy ny hatsiaka mbola tsy vita masonry manerana ny sakan'ny manontolo. Raha misy ny fahafaha-mamita fanaovan-fananganana ny tafo talohan'ny frosts — foana hanafina ny rindrina ho an'ny ririnina amin'ny tafo ara-nofo mba hisorohana ny rano ingress an-voids ' ny biriky sy ny fahatongavana ho kotsa ny tonon-taolana eo amin'ny masonry. Noho ny glut ny biriky amin'ny rano, arahin'ny miverimberina ny hatsiaka sy ny thawing dia tsy voahilika flaking sy chipping ampahany crock olona biriky tratran'ny be loatra glut ny rano.Noho izany antony izany dia tsy nanolorana azy ho mampiasa endrika miatrika biriky ho an'ny fananganana ny fefy toy ny biriky fefy manodidina ny taona oversaturated amin'ny hamandoana sy ny iharan'ny miverimberina ny hatsiaka sy ny thawing (ao amin'ny vanim-potoana mihoatra ny in-100), izay mampihena tanteraka ny mateza, ka mahatonga ny famoretana sy ny delamination ny biriky ao amin'ny masonry fefy. Noho ny fefy izany no nanolorana azy ho mampiasa biriky amin'ny rano absorption ny 4-6%. Mba hanatsarana ny mateza ny rafitra dia soso-kevitra mba hitondra ambonin'ny masonry hydrophobic ranon-javatra. Gidrofobizatora impregnation dia nanolorana azy ho mampiasa ny manaraka filaharana: a) alohan'ny nametraka ny anoloana ambonin'ny ceramic biriky mandroboka ao gidrofobizatora ranon-javatra any amin'ny andalana voalohany ny voids; b) rehefa vita ny asa amin'ny tenan'ny coating hydrophobic ranon-javatra maina ambonin'ny masonry, mandra saturation feno, amin'ny tsy maintsy tsofina seams.Ny seam ny masonry no mampiavaka ny endriky ny meniscus (ny ivelany ambonin'ny seam). Namorona ny meniscus, amin 'izany famehezana ny ivelany ampahany amin' ny seam, izay manatsara ny hery toetra ny simenitra mpiara-ary dia toy izany no mampitombo ny fanoherana ny seam rotsakorana. Ankoatra izany, isan-karazany ny meniscus, amin'ny alalan'ny tenany, ny mahakasika ny fanamafisana ny mihasimba ny masonry. Noho izany, ny recessed seams (boribory concave sy concave dvukratny), noho ny milalao ny aloka, tsara ny hanamafisana ny tsirairay biriky, manome ny masonry ny ambony indrindra ny mihasimba. Mifanohitra amin'izany fisaka sy curved seams hanome ny rindrina kokoa fanamiana. Soso-kevitra iraisana hateviny dia ny 8 mm. Ambony indrindra 10-12 mm. ny matevina ny seam, ny kokoa conductivity manana rindrina toy ny conductivity coefficient ny weld ny fototry ny rihitra simenitra dia ambony lavitra noho ny conductivity mafana ny ceramic biriky. Noho izany, ohatra, ao amin'ny sakan'ny 12 mm ny fanoherana ny hafanana conduction hiatrika brickwork mihena mankany amin'ny rindrina amin'ny sakan'ny seam ny 8 mm eo ho eo amin'ny 1.5-2% (tokotokony mafana kajy). Meniscus seam namorona manokana mombamomba rassevat, isaky ny bead karazana manana ny manondro.